I-PaveAI: Umntu othile ekugqibeleni uzifumene iimpendulo kuGoogle Analytics! | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 27, 2017 NgoMvulo, Februwari 27, 2017 Douglas Karr
Iminyaka besizabalaza kunye nabathengi kunye neengcali zenza izigqibo ezingalunganga ngokusekwe kubahlalutyi. Zininzi iziphene, ngakumbi nge google Analytics, ukuba abantu bahlala bengazi:
Ukuhamba ngenkohliso - kubahlalutyi ukugcwala akubandakanyi utyelelo olwenziwe zi-bots. Ingxaki kukuba kukho izigidi ze-bots ngaphandle apho ezifihla ubunikazi bazo njenge-bot. Batyelele kube kanye okomzuzwana, ngokwenyusa amaxabiso akho okunciphisa kunye nokunciphisa ixesha lakho kwindawo. Ngaphandle kokucoca ngokufanelekileyo, unokwenza izigqibo ezingalunganga.
Ukugcwala komoya / ukuGqithiselwa kugqirha -Kukho ii-idiots phaya ezonakalisa iifayile zakho kubahlalutyi pixel kwaye uqhube ukugcwala kwabantu bakho bebonisa ukuba bayindawo yokuthumela eyakho. Awunakho nokubathintela kuba bengatyeleli indawo yakho kwaphela! Kwakhona, ukungaluhluzi olo tyelelo kuwe kunokuchaphazela izigqibo zakho.
Ukungaqondakali kweTrafikhi - uthini ngeendwendwe ezize kwindawo yakho ngenjongo, kodwa zashiya kuba befuna enye into? Sasinomthengi kanye owabekwa kwindawo ephezulu kakhulu kwikhowudi yesikhululo sikanomathotholo yendawo. Ngalo lonke ixesha kukho ukhuphiswano kunomathotholo, ukugcwala kwabo kwakusokola. Silisusile iphepha kwaye sacela ukuba lisuswe kwiinjini zokukhangela- kodwa hayi ngaphambi kokuba lenze isiphithiphithi kwiqela lezentengiso apho lingakhange lisifumane.
Ke uyicoca njani kwaye uyihlule njani kubahlalutyi idatha phantsi kwecandelo elisebenzisekayo, elisebenzayo elikwenza ukuba uhlalutye ngokuchanekileyo isimilo sabatyeleli?
I-PaveAI: Ukuqonda okuzenzekelayo kokuHlola
Wamkelekile, I-PaveAI. I-PaveAI ikuvumela ukuba udibanise iGoogle Analytics, iGoogle Console yokuKhangela, iiAdwords zikaGoogle, iiNtengiso zikaFacebook, iiNtengiso ze-Instagram (nge-Facebook Business Manager) kunye neeNtengiso zeTwitter. Iqonga labo emva koko lisebenzisa ialgorithm yeAI kunye neendlela ezahlukeneyo zokubala ezisekwe kwidatha yakho yokuthengisa ukulandelela umva yonke idatha oyifunayo ukuze wenze izigqibo ezizizo. Iingxelo zide zibonelele ngamacandelo kunye namathuba abo okuba akhokele okanye abhalisele.
Sithathe iisampulu kwiinkqubo ezimbalwa eziguqula iGoogle Analytics ukuba ibe sisiNgesi sanamhlanje kwaye zibonise iingxelo ezintle. Kwaye sonakalisile ngetoni yezixhobo zedashboard apho ... kodwa akukho namnye kubo owayebonelela abathengi bethu ngesishwankathelo abasifunayo kunye nokusinika ukuqonda esikufunayo ukwenza uhlengahlengiso. I-PaveAI yenza zombini! Inyani yokuba baya kunika ingxelo ngeyakho kubahlalutyi Iinjongo kunye nexesha leseshoni zikwabalulekile. Nantsi ingxelo yesampula:
Ingxelo yeSampuli yePaveAI-Isizukulwane sokuKhokela
I-PaveAI sele isebenza idatha yabakhenkethi abangaphezu kwezigidi ezingama-400 rhoqo ngenyanga. Basusa isikhombisi esichazayo ngokuzenzekelayo kwaye bazisa idatha yakho yokubhaliselwa kweleta ngokunjalo.
I-PaveAI: Izibonelelo kunye neMeko zokuSebenzisa
Kwimilinganiselo yabo, I-PaveAI uncede abathengi baphumelela I-avareji yokunyuka kwama-37% kwisizukulwana esikhokelayo okanye ingeniso emva kweenyanga ezintathu, kunye nomndilili Ukugcinwa kwe-2x Iiarhente ngaphezulu konyaka. Ungathethi ngexesha abanceda abathengisi ukuba balondoloze ekuhlalutheni nasekuhlanganiseni iingxelo ezivela kwiinkqubo ezahlukeneyo.
Bhalisela uvavanyo lweentsuku eziyi-14 zasimahla zePavayi
Amaxabiso afikeleleka ngokumangalisayo ngokunikwa ixabiso ledatha ebonelelweyo. I-PaveAI ikwanelayisensi yeshishini, ilayisensi ye-arhente, kunye nokubhalwa kwencwadi emhlophe ekhoyo.
tags: aiUhlalutyokukubhadla okungeyonyaniUhlalutyo lwe-imeyilei-google analyticsisizukulwana esikhokelayoipayiukuxela kwangaphambiliUhlalutyo oluqikelelweyoamathuba
Umbono6 Udibanisa i-Eventbrite yezimemo kunye noLawulo lweeNdwendwe